uncwadi lwezothando | Uncwadi lwangoku
Encarni Arcoya | | Inoveli yothando
Phakathi koncwadi kukho iindidi ezininzi: amapolisa okanye i-noir, i-comedy, idrama, uloyiko ... kwaye phakathi kwazo, uncwadi lothando. ESpain yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu unyaka wonke, yiyo loo nto abavakalisi abaninzi bebheja ngayo.
Kodwa, yintoni uncwadi lothando? Yintoni enayo? ¿Kutheni ibaluleke kangaka nje? Siza kukufumanela yona kweli nqaku.
1 Yintoni uncwadi lothando
2 Iimpawu zoncwadi lothando
3 Kutheni le noveli yothando ibaluleke kangaka
4 Iingcebiso zokubhala inoveli yothando
Yintoni uncwadi lothando
Ukuba bekuya kufuneka sichaze ukuba luyintoni na uncwadi lothando, ngokungathandabuzekiyo besiya kuthi libali lothando phakathi kwabantu ababini nangaphezulu elinesiphelo esimnandi. Ngoku, inyaniso kukuba oku akusoloko kunjalo. Ngokomzekelo, kwimeko kaRomeo noJuliet, ibali alipheli kakuhle, kodwa abaninzi bacinga ukuba lingaphakathi kwi-romanticism.
Ngokwenene isitshixo kula mabali kukuphuhlisa ubudlelwane bothando, kuthando oluphilayo. Nangona ekuqaleni kwakukho amabali kuphela anesiphelo esimnandi, ngoku ivulekile ngakumbi kwaye kunokubakho amabali abuhlungu, apho uthando, nangona luloyisa, alukwenzi ngendlela umntu anokucinga ngayo.
Kwakhona, olu ncwadi yothando aluvuleleki kuphela kwizibini zesini esingafaniyo (kunye namalungu amabini) kodwa uthando lobufanasini, abathathu, kunye nezibini ezingaphezulu nazo ziya kuba nendawo.
Iimpawu zoncwadi lothando
Ukuba singena nzulu kwiincwadi zothando, asifumani kuphela isiphelo esonwabileyo (okanye esikrakra), kodwa sinokufumanisa ukuba, kuyo yonke imbali, singafumana subplots eziliqela. Ngamanye amazwi, inoveli yothando ayifanelanga ukuba ibe yeyothando kuphela, kodwa inokuphuhlisa imixholo evela kwezinye iindidi zoncwadi, njengolwaphulo-mthetho, uloyiko, idrama ... Logama nje igcina ikhonkco eluthandweni, akufuneki kubekho ngxaki. kule meko..
Olunye uphawu yi Lulwele olo thando. Phantse kuzo zonke iinoveli, into yokuba abalinganiswa babeka engozini yonke into ngenxa yothando lwabo yenye yezona mvakalelo ezinamandla ezinokuchazwa. Ngoko ke, yinxalenye yokubaluleka kwayo, ukuba uthando lungaphezu kwayo yonke into, nokuba luthando olwalelweyo, olungenakwenzeka, olungafunwayo ...
Las iinkcazo nazo zibaluleke kakhulu kwiincwadi zothando, mhlawumbi kungekhona kakhulu kwindawo apho abalinganiswa bekhona xa kuziwa ekuboniseni iimvakalelo, ukunyakaza kunye noko isibini esikholelwayo kunye nomnye. Ngamanye amazwi, into abantu abaziva ngayo iyoyisa inkcazo yemiboniso okanye indawo.
Ezo nkcazo kunye neemvakalelo zezona zibalulekileyo, kwaye apho abaninzi banokona, ngamanye amaxesha ngenxa yokugqithisa, ngamanye amaxesha ngenxa yokunqongophala kwabo.
Isiqhelo, okanye iimpawu, abathi ababhali nababhali abaninzi bazitsibe malunga nazo "uthando lwendawo", oko kukuthi, ukufumana iinoveli kwindawo ohlala kuyo, nokuba sisixeko okanye ilizwe. Amaxesha amaninzi ababhali bathanda ukuzifumana kwamanye amazwe, nokuba zibhaliwe, bachithe ixesha apho okanye imbali ifuna oko.
Kwaye ethetha ngombhali, kukho izitshixo ezibini abadla ngokuzishiya kumabali abo: kwelinye icala, amava abo, nangona oko akuthethi ukuba yonke inoveli iyinyani, kodwa kunokuba bayakwazi ukudibanisa iziganeko zokwenyani kunye nezo zingekho ukuze umntu angayazi into eyinyani kunye nento engeyiyo. ; kwelinye, "uqobo", oko kukuthi, umlinganiswa oyintloko. Ngenxa yesi sizathu, amabali amaninzi kwiinoveli zothando ahlala ebhalwa kumntu wokuqala (nangona unokuzifumana kumntu wesithathu).
Okokugqibela, sinokuthetha "ngentlekele" kuba iqhina lebali liya kuhlala liyimeko eyenza uthando lube buthathaka kwaye abalinganiswa kufuneka balwe, okanye banciphise, ngenxa yolo thando.
Kutheni le noveli yothando ibaluleke kangaka
Ukuba uyawakhumbula amagqabantshintshi esiwenzileyo kuwe ngaphambili, satsho eSpain inoveli yothando yenye yezona zithengiswa kakhulu. Ngapha koko, ngokwedatha ephathwa ngabapapashi, luncwadi lothando olufumana i-boom. Kwaye oko akubalwa iinoveli ezipapashiweyo zolo hlobo njengazo zithengiswa eAmazon, Lulu, njl.
Kutheni le nto inoveli yothando iphumelele kangaka? Unokucinga ukuba kungenxa yokuba abafazi bebaninzi kwaye bafunda kakhulu. Kodwa inyaniso yeyokuba kukho inkitha yabaphulaphuli abangamadoda abondla ngolu ncwadi.
Ngokwenene impumelelo inokuza kwibali lothando ngokwalo. Kwinkoliso yeencwadi, luthando oluzoyisa zonke izinto, yaye loo nto yenza abaninzi bacinge ngaloo ndlela yokuthanda omnye umntu, ukusa kwinqanaba lokuba ingabi yokwenene, ubuncinane kubomi bokwenene. Sinokuthi ngamabali apho okwenzekayo kuhlala kunesiphelo esihle, okanye phantse rhoqo. Kwaye ebantwini iba yinkohliso, ithemba, okanye indlela yokuphupha ngelixa uhlala elukhumbeni lomnye umlinganiswa.
Iingcebiso zokubhala inoveli yothando
Ukuba emva koko sikuxelele malunga noncwadi lwezothando ufune ukuzama olu hlobo, kukho iingcebiso esinokukunika zona ukuze ube nombono ocacileyo wokuba ungaqala njani.
Into yokuqala kukuba ucace kakhulu malunga nesihloko esiza kuxoxwa ngaso. Nangona inokuba yimbali, emnyama, ehlekisayo, inoveli yedrama ... eyona nto iphambili kwaye ungaze uyilibale kukuba ujongene nenoveli apho uthando kufuneka lubongwe. Kwaye ngothando akufanele nje uqonde iimvakalelo zomntu omnye ngomnye. Kodwa i-adventure aba balinganiswa baya kuba nayo yokulwela uthando lwabo, nokuba kungenxa yokwahlukana kwezentlalo, umgama, iminyaka ...
Kwimeko yabalinganiswa, kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ufuna ukubhala kumntu wokuqala okanye wesithathu. Ukuba uyenza kuqala, kuya kufuneka ukhethe ukuba yeyiphi i-protagonist eya kuba yiyo kwaye ugxininise kuphela kwiimvakalelo zabo kunye nendlela yokubona ihlabathi. Oku kwenza umfundi angayazi indlela omnye umntu aziva ngayo.
Ukuba ukhetha umntu wesithathu, unokutshintshana phakathi kweemvakalelo zomnye kunye nomnye. Kodwa kufuneka ulawule kakuhle kakhulu indlela oyibalisa ngayo ukuze ungacebisi ibhalansi (kunye nelizwi) ukuya kwenye okanye kwenye.
Ngakolunye uhlangothi, kufuneka ucinge ukuba ingxabano, isicwangciso okanye isizathu sokudala elo bali siya kuba yintoni. Ukubulala, ukungcwatywa, usuku nosuku, umsebenzi omtsha ... Kukho iindlela ezininzi zokubonisa ibali. Kwaye okubaluleke ngakumbi kunokuba ingxabano iya kuba yingxabano. Oko kukuthi, iimeko aba balinganiswa baya kudlula kuzo kwaye kuya kufuneka balwele uthando lwabo. Kungcono okanye kubi.
Ngaba usenawo amathandabuzo ngoncwadi lothando? Sibuze!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli yothando » uncwadi lothando
Ubomi bukaRosalia de Castro